Biden oo kordhinaya tirada qaxootiga uu dalkaas qaabilo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Biden oo kordhinaya tirada qaxootiga uu dalkaas qaabilo
Go’aanka ayaa la sheegay inay saameyn ku yeesheen dhibaatooyinka ka taagan xadka Mareykanka iyo Mexico
Madaxweyne Joe Biden ayaa dib u eegis ku sameeyay go’aanka qaxootiga saacado kaddib markii uu saxiixay in tirada qaxootiga ee sanad walba loo oggol yahay inay Mareykanka galaan loo daayo intii ay ahayd xilligii Trump.
Mr Biden ayaa go’aankaas sheegay Jimcihii kaddib markii uu tirada qaxootiga ee dalkaas loo oggol yahay ka dhigay 15,000, labo bilood kaddib markii uu codsaday in la kordhiyo oo laga dhigo 65,500.
Aqalka Cad ayaa goor dambe sheegay in bisha soo socota uu Mr Biden kordhin doono tirada qaxootiga.
Wararka ayaa sheegaya in Mr Biden uu ka walaacsan yahay in tiro badan loo oggolaado dalkaas xilli ay qaxooti badan ku soo qulqulayaan xadka Mareykanka iyo Mexico.
Tirada Qaramada Midoobay ayaa muujinaya in in ka badan 80 millyan oo qaxooti ah guud ahaan dunida, iyadoo 85% ka mid ah ay marti gelinayaan dalalka horumaray.
Maxaa lagu sheegay amarka Biden?
Aqalka Cad ayaa sheegay in amarkii Jimcihii uu dardar gelin doono qaxootiga loo oggol yahay inay galaan Mareykanka – tan iyo October ilaa 2,000 oo qof ayaa loo oggolaaday inay dalkaas galaan.
Amarkan ayaa sidoo kale beddelaya qaabkii dadka loogu qoondeyn jiray inay Mareykanka galaan, iyadoo muhiimadda la siinayo dadka ka imaanaya Afrika, Bariga Dhexe iyo Bartamaha Ameerika, iyo in la soo afjaro xayiraaddii saarneyd dadkii ka imaanayay Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen.
Balse Mr Biden – oo wacad ku maray xilligiisii ololaha inuu kordhin doono tirada qaxootiga – ayaa tirada ugu badan ee dalkaas loo oggolaan doono sanadkii ku koobay ilaa 15,000, tiradaas oo uu dejiyay madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump.
Muuxu markii dambe sheegay Aqalka Cad?
Afhayeen u hadashay Aqalka Cad oo lagu magacaabo Jen Psaki ayaa sheegtay in amarka madaxweynaha Dimuqraaddiga ah uu abuuray jahwareer, kaddib markii warkaasi uu caro ka abuuray kooxaha gargaarka iyo xisbiga madaxweynaha qudhiisa.
Ms Psaki ayaa sheegtay in amarkii Biden ee Jimcihii looga gol leeyahay in duullimaadyada qaxootiga ee Mareykanka dib loo bilaabo maalmo gudahood.
Waxay intaas ku dartay: “Markii sidaas la sameeyo, waxaan ka fileynaa madaxweynaha inuu dejiyo xilli kama dambeys ah oo la kordhinayo qaxootiga inta ka harsan sanadkan wixii loo gaaro May 15.”
Ma aysan carrabaabin tiro, inkastoo ay tiri “hadafkiisii ugu horreeyay ee 65,000 waxay u muuqataa mid aan suurto galeynin”.
Khudbad uu jeediyay February, ayuu Mr Biden wacad ku maray in tirada uu ka dhigi doono 125,000 muddo sanad gudihiis ah.
Ku dhowaad 85,000 oo qaxooti ah ayaa dib u dejin loogu sameeyay Mareykanka intii lagu jiray sanadkii ugu dambeeyay ee madaxtinnimadii Barack Obama.
Waa maxay facelinta laga bixiyay?
Jenny Yang, oo madaxweyne ku xigeen sare ka ah World Relief, oo ah urur arrimaha bani’aadannimada ah, ayaa CNN u sheegtay in Aqalka Cad uu sheeganayo in barnaamijka dib u dejinta qaxootiga ee Mareykanka ee loo baahday in dib u eegis lagu sameeyo ay “gebi ahaanba been tahay”.
“Kuma dhisna wax xaqiiq ah,” ayay tiri. “Ma ahan inaysan heysan wiixi loo baahnaa. Waa wax ku saleysan siyaasad.”
Sarkaal Mareykan ah ayaa goor sii horreysay sheegay in maamulka uu ka walaacsanaa inuu u muuqdo mid aad ugu furfuran kordhinta tirada muhaajiirinta imaanaya xadka Mexico.
Bishii March, ugu yaraan 172,000 muhaajiriin ah ayaa lagu qabtay xadka Mareykanka iyo Mexico, qaarkoodna waxay ahaayeen carruur aan la wehlin.
Previous articleG Sool Tuuloyin Ka Mida Dagaal Lagu dhintay oo Ceel Biyood Sabab u ahaa, iyo Xukuumada Somaliland oo Amaanka Ka shaqaynayasa
Next articleBiden oo kordhinaya tirada qaxootiga uu dalkaas qaabilo
Sadiq Khan oo mar kale loo doortay Duqa Magaalada London
Kornayl Doolaal ,Xadhigayga raga ka bayac mushtary
Boqor Buurmadaw Wuxuu Ka War Hayey Muddo Saddex Cisho Ah In Lagu Soo Daynayo Dolaal…
Boqor Buurmadaw Wuxuu Ka War Hayey Muddo Saddex Cisho Ah In...
Gataaalkii Hawada sare Kasoo Dhacay Xaguu ku dhacay,shinnaha oo shaaciyay
BERBERA Cisbitaalka Dhimirka Berbera oo Lasoo gaadhsiiyay Dharkii ciida iyo xoolihii...
John Mahama oo loo magacaabay ergayga Midoowga Afrika ee Soomaaliya
Kenya oo xalaallaysay hilibka dameeraha,
Wasiirka Caafimaadka Oo La Waydiiyey, Waxa Masuuliyiinta Xukuumadda Loo Dhigi Waayo...
Madaxweynaha Somaaliland Ayaa Kulan La Qaatay Gudoomiyaha Shirkada DP WORLD
Dubai’s DP World and Ethiopia strike $1bn deal to develop trade...
Dp World Waxay raashin u qaybisay Bisha ramadaan 3500 oo Qoys...
Wasiirka Maaliyadda Qatar oo loo xiray tuhun musuq-maasuq
Habar Jeclo hadaynu nahay Dekadan Waynu dhisanaynaa, Halkani XIIS waa...
Maxay tahay sababta ay Dowladda Soomaaliya uga noqotay xiriirkii ay u...